Churos - Chinyakare Spanish Roll | Art sens - mazano eimba nebindu
Churos - Chinyakare Spanish Tolminbi
30.05.2016 Yakatumirwa na: Art Sense
Iyo dessert, inonzi Churo / Churos, inomhanyisa uye yakapusa kugadzirira hupfu hwakatapira hwakasimba hwakafanana nemadrinks akajairwa uye hunopararira munzvimbo dzechiSpanish neechiPutukezi. Mabviro eChuros haana kujeka, asi sekufunga kwakawanda kunoita nyika dzeSouthern Europe kuona zvechinyakare, kazhinji kacho vaiunzwa kubva kugungwa uye vafambi vanobva kuChina, uko kunozivikanwa seYu-Tiao (Tsika Kit - 油條) nemamwe mazita mazhinji. Nekudaro, zvisinei nekwainobva, imwe neimwe cuisine yenyika inowedzera zvakasiyana zvakasiyana kune imwe ndiro, ichikurudzira uye kuinatsa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune dzakawanda dzakasiyana nuances mukugadziriswa kwehupfu uye mune dzakawanda kesi ino dessert yakaomeswa, asi pano isu tichapa imwe yemasarudzo ekugadzirira kwe churros, sarudzo yekurapa kupisa inogona kusiyana maererano nezvaunoda.
Mvura - 250 ml.
Cow mafuta - 110 gr.
Denga - 150 c.
Mazai (saizi yakakura) - 3 pc.
Shuwa - 1 supuni + 50 magiramu.
Cinnamon, shuga yesinamoni - inosarudzika
Sezvacherechedzwa, churoses inogadzirwa nekukurumidza uye nyore, asi zvakakosha kuti uone tekinoroji yekugadzirira mukanyiwa.
Oiri yacho inofanira kutanga yanyungudutswa mumvura yepakati-yakakwirira, ipapo hupfu hunofanira kuwedzerwa zvishoma nezvishoma. Sakanidza nehuni kana kuti silicone paddle kusvikira musanganiswa uchinge wapetwa. Simbisa zvinyoro-nyoro, zvishoma nezvishoma, mushure meminiti kana maviri, hupfu hwacho hunotanga kuunganidza mubhora, asi ramba uchimutsa kusvika wanyatsotsvedza. Bvisa hupfu kubva pamoto uye uuye utonhore. Wedzera mazai aya rimwe nerimwe uchikurudzira nesimba. Mushure mekuwedzera yezai rimwe nerimwe, musanganiswa wacho uchanyorovesa, asi usazvidya mwoyo, asi ramba uchimutsa. Pakupedzisira Wedzera supuni yeshuga.
Chinjana hupfu hwakapera kune confectionery chirongo kana syringe. Izvo zvakanaka kuve nenyeredzi-yakavezwa mhasuru sezvo izvi zvichizopa kupisa kwakanyanya kurapwa nzvimbo, asi kana iwe usina midziyo yakadai uye yakapusa yakatemwa nylon envelope ichaita basa rekugadzira iwe. Iwe unogona kupfira mune preheated grisi kana syringe pabhabheki yekubheka uye woisa mune preheated 200 degree ovheni yeinenge 12-15 min .. Kana kusvikira ndarama. Chimiro chinogonawo kunge chakasiyana - matanda akareba, bhiza, mweya, nezvimwe. Yakapera churros yakakungirwa ichapisa, mune shuga nesinamoni. Kana iwe uchinge wazvikuya, zvakanaka kuti uzvimbidze muchidimbu usati wazungunuka. Kana zvanyoroveswa kune tembiricha yakakodzera kunwiwa, ivo vanonwiwa necoketi, inotapira, kirimu kana zvimwewo.
artess dessert, dessert inoyevedza, nekukurumidza dessert, chinonaka, dessert, churo dessert, dhiziri, Spanish dhiziri, Chinese dessert, mapikicha, churo, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Cupcake ine mukesi chokoreti
Iyo yekubheka iri nyore chaizvo uye shuwa munhu wese achakwanisa kuitevera. Zvinodiwa Zvigadzirwa: ...
Zvishoma nezvishoma, mweya weKisimusi yakakunda diki uye yakakura mumwedzi yekupedzisira yegore. Kubva pasirese ...
Mbatatisi - nhaka yedu kubva kumaInca
Mbatatisi nhaka yedu kubva kumaInca. Nekuti zvisikwa zvemusango nhasi zvinogona ...